Shiinaha warshad cunto gelatin iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Ku gelatin cunto xalka waa in si fiican loo walaaqaa ka hor intaan la isticmaalin, si markaa xalka uu ugu jiro xaalad isku mid ah. Haddii gelatin cunto waxa ku jira xalka aad ayuu u weyn yahay, waa in lagu qasi karaa biyo kulul kahor intaan la isticmaalin, sidaa darteed isku urursiga gelatin cunto waa ku habboon tahay, iyo xoogga jelka ka dib marka uu barafoobo ayaa ku habboon. Kahor intaadan isticmaalin xalka gelatin cuntada, gaar ahaan xilliga qaboobaha ama marka heerkulka qolku hooseeyo, weelka ku jiragelatin la cuni karo xalka waa in lagu diiriyaa qubayska biyaha kulul si loo ilaaliyo gelatin cunto xaalada xalka. Haddiigelatin cunto la qaboojiyey, waa in lagu kala diraa qubeyska biyaha kulul.
Cuntadayada gelatin ee ku jirta heerka cuntada waa bilaash dufan iyo karbohaydraytyo. Maaddaama ay tahay shey borotiin saafi ah, sidoo kale kuma jirto maaddooyin xasaasiyadeed oo way fududahay in la dheefshiido. Aad ayey ugu habboon tahay sameynta suxuunta kaloriinta yar ee macaan iyo macmacaanka yar. Tusaale ahaan, jelii hilib dhadhan leh, buuxinta keega, caano jelly iyo jelly. Gelatin la cuni karo waxaa laga sameeyaa lo'da ama maqaarka doofaarka, ama marka loo eego shuruudaha cuntada xalaasha ama kosher, waxaa laga sameeyaa 100% alaabada ceeriin ee lo'da.
Hore: Gelatin Bovine